Ububi obudingekayo? I-Apple ingathola izithombe zokuhlukunyezwa kwezingane kugalari yezithombe zabasebenzisi | Kusuka kuLinux
Ububi obudingekayo? I-Apple ingathola izithombe zokuhlukumeza izingane kugalari yezithombe zabasebenzisi
I-Apple imemezele ukufika kwezici ezintsha i-ID yesithombe ku-iOS okuyi izosebenzisa ama-hashing algorithms ukufanisa okuqukethwe kwezithombe kugalari zabasebenzisi ngezinto ezaziwayo zokuhlukunyezwa kwezingane. Idivayisi izobe isilayisha isethi yeminwe emele okuqukethwe okungekho emthethweni bese iqhathanisa isithombe ngasinye kugalari yomsebenzisi kulolo hlu.
Njengalokhu, lo msebenzi uzwakala umuhle, kepha empeleni umelela nenkinga yangempela, ngoba abaningi bethu bangacabanga, lokhu kungadala izingxabano eziningi, ikakhulukazi "ngezinzuzo ezingamanga" futhi ngukuthi ukwahlulela ngenani lokubuyekezwa okungekuhle kwe-Apple, lesi sinyathelo kungenzeka singabi yinkampani ehamba phambili ekulweni kwayo nezithombe zocansi zezingane.
U-Apple ukuqinisekisile eposini le-blog, wathi ubuchwepheshe bokuskena buyingxenye yochungechunge olusha lwezinhlelo zokuvikela izingane "ezizoguquka futhi zithuthuke ngokuhamba kwesikhathi." Imisebenzi izokhishwa njengengxenye ye-iOS 15, okulindeleke ukuthi yethulwe ngenyanga ezayo.
"Lobu buchwepheshe obusha obusematheni buvumela i-Apple ukuthi ikwazi ukuhlinzeka ngolwazi olubalulekile nolungenzeka lusebenze kuNational Center for Missing & Exploited Children kanye nabomthetho mayelana nokwanda kwempahla eyaziwayo yokuhlukumeza izingane ngokocansi," kusho le nkampani.
Uhlelo, olubizwa I-neuralMatch, izokwazisa ngokucophelela iqembu labahloli babantu uma ucabanga ukuthi izithombe ezingekho emthethweni zitholakele ngubani ozoxhumana namaphoyisa uma impahla ingaqinisekiswa. Uhlelo lwe-neuralMatch, oluqeqeshwe ngezithombe ezingama-200.000 ezivela eNational Center for Missing & Exploited Children, luzosatshalaliswa okokuqala ngqa e-United States. Izithombe zizoshiswa futhi ziqondaniswe nedatha yezithombe ezaziwayo zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi.
Ngokwencazelo ka-Apple zonke izithombe ezilayishwe ku-iCloud e-United States zizothola "ibhonasi yezokuphepha" okukhombisa ukuthi kuyasolisa noma cha. Ngakho-ke, uma inani elithile lezithombe limakwe njengelisolisayo, i-Apple izovumela ukususwa kokubhalwa kwazo zonke izithombe ezisolisayo futhi, uma zibonakala zingekho emthethweni, zizodlulisela kuziphathimandla ezifanele.
"I-Apple ibona kuphela izithombe zabasebenzisi uma baneqoqo lama-CSAM aziwayo kwi-akhawunti yabo ye-iCloud Photos," kusho le nkampani ngomzamo wokuqinisekisa abasebenzisi ukuthi imininingwane yabo iyimfihlo.
Kumele kuqashelwe ukuthi I-neuralMatch imele umzamo wakamuva we-Apple wokushaya isivumelwano phakathi kwesithembiso sayo sokuvikela ubumfihlo bamakhasimende nezimfuno zohulumeni., abomthetho kanye nezishoshovu zokuphepha kwezingane ukuze bathole usizo olwengeziwe ekuphenyweni kobugebengu, kufaka phakathi ubuphekula nezithombe zocansi zezingane. Ukungezwani phakathi kwezinkampani zobuchwepheshe ezifana ne-Apple ne-Facebook, okuthembise ukusetshenziswa kwazo okwandayo kokubethela emikhiqizweni nasezinsizeni zabo, futhi ukuphoqelelwa komthetho kuye kwaqina kuphela kusukela ngo-2016.
UMatthew Green, onguprofesa wase-Johns Hopkins University kanye nomlobi we-cryptographer, uzwakalise ukukhathazeka kwakhe ngalolu hlelo kuTwitter ngoLwesithathu ebusuku. “Lolu hlobo lwamathuluzi lungaba yisibusiso sokuthola izithombe zocansi ezinganeni ezingcingweni zabantu,” kusho uGreen.
"Kodwa ake ucabange ukuthi yini ebingayenza ezandleni zikahulumeni wobushiqela," kubuza yena. Lokhu kuyabakhathaza abacwaningi bezokuphepha abaxwayisa ngokuthi kungavula umnyango wokuqapha amadivayisi ezigidi zabantu. Abaphenyi bezokuphepha, ngenkathi besekela imizamo ka-Apple yokubhekana nokuhlukunyezwa kwezingane, banovalo lokuthi inkampani ingavumela ohulumeni emhlabeni jikelele ukuthi bafune ukufinyelela kwimininingwane yezakhamizi zabo, okungaphezulu kakhulu kwenhloso yayo yasekuqaleni.
Isibonelo esabekwa yi-Apple singakhuphula nengcindezi kwezinye izinkampani zobuchwepheshe ukuthi zisebenzise amasu afanayo. "Ohulumeni bazoyifuna kuwo wonke umuntu," kusho uGreen.
Izinhlelo zokugcina amafu nezithombe ezinkundleni zokuxhumana sezivele zifuna izithombe zokuhlukunyezwa kwezingane. I-Apple isebenzisa, ngokwesibonelo, amasu we-hashing lapho izithombe zilayishwa ku-ICloud Photos. Zonke izithombe ezilayishwe kuzithombe ze-iCloud zokwenza isipele nokuvumelanisa azigcinwa ekubetheni kokuphela kokuphela. Izithombe zigcinwa ngendlela ebetheliwe emapulazini e-Apple, kepha okhiye bokubhala ngemfihlo nabo bangabakwa-Apple. Lokhu kusho ukuthi amaphoyisa angabiza u-Apple futhi abone zonke izithombe ezilayishwe ngumsebenzisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Ububi obudingekayo? I-Apple ingathola izithombe zokuhlukumeza izingane kugalari yezithombe zabasebenzisi
Yini ubuwula. Kuthiwani ngabazali abathatha izithombe zezingane zabo?
Lowo ngumbuzo ongena kuzinzuzo ezingamanga
UMiguel Rodriguez kusho
Ngeke ngimangale uma ngokushesha nje lapho lesi sici esisha siphuma, uzokwethuka isibalo esibi kakhulu "sabaxhaphazi" abasebenzisa imikhiqizo ye-Apple.
Phendula uMiguel Rodriguez
Lokhu kubizwa ngomnyango ongemuva futhi ohulumeni bazonikezana ukuze babe nesihluthulelo, izithombe zobulili ezingcolile zibukeka njengezaba "ezizwelayo" zokuthi abantu bazigwinye, kepha abanukubezi bezingane ngeke balume, bazobhala ngemfihlo okuqukethwe okubucayi. Bese kuba nombuzo wanoma yimuphi umbhangqwana othatha izithombe zezingane zawo ezisencane Ngabe i-Apple, noma omunye umuntu, unelungelo lani lokunamathela kulokho okuqukethwe. Ekugcineni, umnyango wangemuva ulungele yonke into, uma usuvulekile futhi usezandleni zanoma ngubani.Ngabe uzokhawulela ekuphishekeleni izithombe zobulili ezingcolile, unokhiye bakho konke?
Into ethokozisayo ngakho konke lokhu ukuthi ngesinye isikhathi bekukhona umuntu oqeqesha leyonto noma ophakamisa amasampula, kimi uqobo, angibekezeleli noma yiluphi udlame, udlame kanye nendaba yokuhlukumeza izingane yinto ebuhlungu kakhulu futhi ebuhlungu mina.
Fuck lolo hlobo lomsebenzi hahaha
IMicrosoft ikhiphe ikhodi yomthombo yesendlalelo se-D3D9On12 esisetshenziselwa ukuhumusha imiyalo ye-Direct3D 9 iye ku-Direct3D 12